सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको दाबी : "मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक पारित हुन्छ" | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार ५ बिहीबार, ११:४६
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको दाबी : “मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक पारित हुन्छ”
२०७६ जेष्ठ ३ गते प्रकाशित, l ०८:२३
काठमाडौं, ३ जेठ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक संसदबाट पारित हुने दाबी गरेका छन् । बिहीबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
पत्रकार धमलाले यस्तो विद्येयक किन ल्याउनुभयो ? भन्दै सुरुमै आक्रामक प्रश्न गरेका थिए । तर, मन्त्री बाँस्कोटाले शालिन भएर यसरी जवाफ फर्काए,”विद्येयक यो मात्रै होईन । हामीले एउटा कुरा संकल्प गरेका छौं । हाम्रोे लोकतन्त्र अब बोल्न मात्रै पाउने, लेख्न मात्रै पाउने तर पेट भर्न चाहीँ नपाउने हुनुहुँदैन् । लोकतन्त्र बलियो हुनको निम्ति मिडिया बलियो हुनुपर्दछ । र, मिडियो बलियो हुनुको निम्ति उसका आर्थिक आधारहरु र उसको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ । त्यसका लागि पूराना ऐन, कानूनहरु, पूरानो प्रविधि र यस क्षेत्रमा आईरहेको विकासक्रमले हामीलाई त्यति धेरै सरल तरिकाले अगाडि बढ्न दिँदैनथियो । त्यसैले विल्कुलै नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन, त्यसको सवलीकरणसँगै जोडिने अर्को पिलर प्रेस हो । र, मिडिया क्षेत्र अहिले एकदमै शक्तिशाली छ ।”
यस्तो महत्वपूर्ण विद्येयक ल्याउनुपुर्व पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला निकाय र यसका सम्बन्धित पक्षसँग छलफल किन गर्नुभएन भन्ने धमलाको अर्को प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले आफूले बुझेको कुरा भनेको मिडियाले सत्य बोल्नुपर्छ भन्दै जवाफ दिए । उनले अघि थपे,”मिडियाले आरोपित गर्नेमात्रै होईन, मिडियाले तथ्यहरुद्धारा सम्पुष्टिपनि गर्नुपर्छ । हामीले ०७२ सालमा नै एउटा आम सञ्चार नीति बनाईसकेका थियौं । त्यतिखेरका माईन्युट हामी हेर्न सक्छौं । पात्रहरु उहाँहरु नै हुनुहुन्छ । पोजिशन के के थियो ? त्यो बेग्लै कुरा हो ।”
२०७६ जेष्ठ ३ गते सम्पादित l ०८:२८